China Polyester Felt fekitori nevagadziri | Huasheng
Chigadzirwa Izita Polyester Felt
Chinyorwa 100% Polyester
Upamhi yakakwira kusvika 3.3m
Kureba 50m / roll, 100m / roll kana yakagadziriswa
Yakatemerwa ruvara sePantone Colour Card
Asina akarukwa sindano yakarangwa
Polyester fiber (yakapfupikiswa sePET fiber) ndeyemhando yekugadzira inowanikwa neiprosester inodhinda inoumbwa neiyo polycondroll ye organic dibasic acid uye doro dihydric. Polyester fiber inonyanya kugadzirwa ne polyethylene terephthalate.
Polyester yakanzwa kunge yakagadzirwa sindano yakarodzwa yakakwakwa yakagadzirwa kubva ku polyester fibers. Iyo polyester fibers inaliti yakarukwa neine yakakosha yekubvisa sindano, imwe iine madiki mabhata pamucheto. Aya mabara anodhonza iyo polyester mukati mayo, inovhara pamwechete kuti igadzire jira.
Polyester yakanzwika inopiwa mumhando dzakasiyana-siyana dzehupfumi uye hukobvu kuti uite zvaunoda. Iyo inopa yakaderera mutengo imwe mbatya, uye inogona kushandiswa mumazhinji maindasitiri uye ekutengesa maapplication. Monarch Textiles inogadzira tsono yakarukwa polyester akanzwa zvigadzirwa kuti asangane nezvirevo zvako.
Polyester akanzwa zvigadzirwa zvinopa mabhenefiti akasiyana siyana. Haisi chete iyo polyester inonzwa isingadhuri kupfuura yakanzwirwa nemvere, asi tsono yakaboorwa yakarukwa inopiwawo kupesana neanogic acid, nyoro, mabara, uye mamwe oxidizing vamiririri ayo anogona kukanganisa zvinhu.
Zvimwe zvakanakira zve polyester felts zvinosanganisira
Kushivirira kwakanyanya kupisa
Kuramba kupfeka uye zuva
Yakakodzera kune yakaoma kupisa application
Yakanakisa yekuunganidza tsvina
Inogara, inoshanduka-shanduka, isinganetsi kudzoreka, kudzora kupokana, kupisirwa, crisp, nyore kushamba uye nekukurumidza-kuomesa hunhu.
DIY kuchenjera, Muchato / Exhibition kumashure, Kisimusi Zvishongo, Coaster uye nzvimbo-mat, mabhegi, shangu, mabhegi, zvipo zvepakeji, kushongedzwa kwemukati.
Yepfuura: Yakadzvanywa Wool Yakanyungudika